စစ်ဘေးဒဏ်သင့် တိုင်းရင်းသားပြည်သူများကို စာနာသော ကမ်ပိန်းလေးမှာ ပါဝင်ဖို့တိုက်တွန်းလာတဲ့ အနုပညာရှင်မျာ – Bagan Thar
စစ်ဘေးဒဏ်သင့်တိုင်းရင်းသားပြည်သူများကို စာနာသောကမ်ပိန်းလေးမှာ ပါဝင်ဖို့တိုက်တွန်းလာတဲ့ အနုပညာရှင်များ
ပရိသတ်တွေကြီးရေဒီနေ့မှာတော့ စစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရာမှာရဲရဲဝင့်ဝင်ပါဝင်နေတဲ့ ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်တွေကတော့နှစ်ရည်လများ စစ်ဘေးဒဏ်သင့် တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုမောင်နှစ်တွေကို စာနာသောအားဖြင့် အားလုံးကိုဒီကမ်ပိန်းလေးမှယပါဝင်ဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။
အောက်တိုဘာ ၁၃ရက်နေ့ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)မှာ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားဝတ်စုံကိုဝတ်မယ်၊ ပြီးရင်လူသားချင်းစာနာမှုကိုပြသတဲ့အဓိပ္ပါယ် နဲ့ ညာဘက်လက်ကိုဘယ်ဘက်နှလုံးသားပေါ် တင်၊ တော်လှန်ရေး သင်္ကေတ လက်၃ချောင်းထောင် ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာ မျှဝေရင်းဒီ ကမ်ပိန်းမှာ ပါဝင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့တိုင်းရင်းသားဝတ်စုံကကိုယ်စားပြုလူမျိုးကဘာလဲ၊
အဲဒီဒေသတွေမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့အတူတကွရှိနေပြီးစာနာထောက်ထားအားပေးကူညီတာတွေလုပ်နေပါတယ်စတဲ့ နှစ်သက်ရာ caption နဲ့ OnlyTogether DRRDay2021Myanmar
StopManmadeDisasterinMyanmar ဆိုတဲ့ hashtag စာသားလေးတွေကိုတွဲတင်ပေးပြီး ဒီကမ်ပိန်းမှာ အားလုံး ပါဝင်ပေးကြဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။ Only together, Can we save the planet!Only together, Can we win the democracy! ဆိုပြီးပြောပြထားတာဘဲဖြစ်ပါတယ်။
အောက်တိုဘာ၁၃ရက်နေ့ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)မှာကိုယ့်မှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားဝတ်စုံကိုဝတ်မယ်၊ပြီးရင်လူသားချင်းစာနာမှုကိုပြသတဲ့အဓိပ္ပါယ် နဲ့ညာဘက်လက်ကိုဘယ်ဘက်နှလုံးသားပေါ် တင်၊ တော်လှန်ရေးသင်္ကေတလက်၃ချောင်းထောင်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာမျှဝေရင်းဒီကမ်ပိန်းမှာပါဝင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့တိုင်းရင်းသားဝတ်စုံကကိုယ်စားပြုလူမျိုးကဘာလဲ၊
အဲဒီဒေသတွေမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့အတူတကွရှိနေပြီးစာနာထောက်ထားအားပေးကူညီတာတွေလုပ်နေပါတယ်စတဲ့ နှစ်သက်ရာ caption နဲ့ OnlyTogether DRRDay2021Myanmar Stop ManmadeDisasterinMyanmar ဆိုတဲ့ hashtag စာသားလေးတွေကိုတွဲတင်ပေးပြီး ဒီကမ်ပိန်းမှာ အားလုံး ပါဝင်ပေးကြဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။ Only together, Can we save the planet!Only together, Can we win the democracy! ဆိုပြီးပြောပြထားတာဘဲဖြစ်ပါတယ်။